Inoraswa guruva-chiratidzo shangu ...
Chinyorwa: polypropylene, isina-yakarukwa machira pasherufu hupenyu: makore maviri Chigadzirwa chinobudirira: kushandiswa kwekudzivirira mumasangano ekurapa Ruvara: bhuruu, chena Chigadzirwa sumo Iyo inogadzirwa neyeganda inoshamwaridzika isina-yakarukwa polypropylene, iyo yakaedzwa zvinhu zvinokuvadza. Iyo yakagadzirwa ne latex yemahara rubber ine yakakwira aggregation dhizaini. Zvese zvinhu zvinoyedzwa kuona kuti yemhando yepamusoro uye mashandiro emitemo akakwirira pane zvinodiwa nemutemo. Aya matanho anodzivirira akasiyana maitiro ehurombo ...
Chinyorwa: isina kurukwa jira Saizi: 15x40cm (inogadziriswa) Maitiro: kusona kana kusimbisa kupisa kupisa maitiro pasherufu hupenyu: makore maviri Chigadzirwa chinobudirira: chengetedza irimo remukati rakachena uye nehutsanana Makuriro ekushandisa: chikafu indasitiri, indasitiri yekuchengetedza nharaunda, yekuchenesa musangano, hotera, hotera, nezvimwewo Ruvara: Kuchengetera Bhuruu: yakaoma, yakavharwa mwenje uye kupisa kupisa chengetedzo Chigadzirwa sumo Izvo zvakagadzirwa neganda zvine hushamwari zvisina kurukwa polypropylene, iyo yakaedzwa zvinhu zvinokuvadza. Yakagadzirwa ne ...
Model: chimwe chidimbu hood chisina bhutsu chifukidziro: s, m, l, XL, XXL, XXXL Shandisa chinhu: Inoshandiswa nevashandi vezvokurapa mumasangano ekurapa kudzivirira kutapukirwa kwehutachiona kubva kuvarwere kuenda kuvashandi vezvekurapa nemhepo kana mvura. Chigadzirwa chinoitwa uye dhizaini dhizaini: Ichi chigadzirwa chinonyanya kuve chakaputirwa pamusoro, mabhurugwa, rabha tambo uye kumashure kora logo. Inonyanya kugadzirwa nepamusoro-soro polyethylene fiber jira, iro rakagadzirwa neHooded imwe-chidimbu dhizaini uye yakasimbiswa neirabha s ...
Chinyorwa: isina kurukwa machira Tsanangudzo: 30g-65g Maitiro: mapfupi maoko uye mabhurugwa Maitiro: kusona kana kusimbisa kupisa kupisa maitiro Shefu hupenyu: makore maviri Chigadzirwa chinobudirira: kushandiswa kwekudzivirira mumasangano ekurapa Makuriro ekushandisa: chipatara, runako, denda kudzivirira , indasitiri yemakemikari, nezvimwe Ruvara: bhuruu, yero, chena, nezvimwe Kuchengetedza: yakaoma, yakavharwa mwenje uye kupisa kupisa chengetedzo Chigadzirwa sumo Izvo zvakagadzirwa neyeganda inoshamwaridzika isina-yakarukwa polypropylene, iyo yakaedzwa ...
Chinyorwa: isina kurukwa jira Tsanangudzo: 30g-65g Chimiro: reverse cover Maitiro: kusona kana ultrasonic kupisa kwekuisa maitiro Shefu hupenyu: makore maviri Chigadzirwa chinobudirira: kuchengetedza kushandiswa munzvimbo dzekurapa Makuriro ekushandisa: chipatara, runako, denda rekudzivirira indasitiri, nezvimwewo Ruvara: bhuruu, yero, chena, nezvimwe Kuchengeta: yakaoma, yakavharwa mwenje uye kupisa kupisa chengetedzo Chigadzirwa sumo Izvo zvakagadzirwa neyeganda inoshamwaridzika isina-yakarukwa polypropylene, iyo yakaedzwa kune inokuvadza subs ...
Tsanangudzo: 15.5 * 10.5cm Executive chiyero: GB 2626-2006 Kuongorora: anokwanisa Bvunzo: Anokodzera Chigadzirwa kuita: PFE ≥ 95%, inosvika kn95 nhanho. Chigadzirwa chinogadzirwa: PFE≥95%, inosvika KN95 nhanho. Mbishi zvigadzirwa: isina kurukwa jira 54%, meltblown machira 24.5%, inopisa mhepo donje 21.5% Raw Zvishandiso: 54% isina kurukwa jira 24.5% yakanyunguduka yakaputika 21.5% mweya wedonje. Ukoshi: Makore maviri Chigadzirwa chinoshanda: Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nePP isiri-yakarukwa jira, yakanyungudika jira rakaputirwa, mhino clip, yakarembera bhandi uye zvichingodaro. Thro ...
Raw Raw: 100% donje Chigadzirwa mashandiro: Yevakuru-saizi isiri-yekurapa-giredhi jira kumeso kumeso Tsanangudzo: 5 3/4, L x 3 1/8 ″ H. Ruzivo rwekuwedzera: Inogadziriswa, yakasununguka pamusoro-pe-nzeve tambo Yakagadzirwa paCDC kurudziro pane asiri-ekurapa-giredhi masiki. Mivara Inowanikwa: Yakasarudzika Chigadzirwa mashandiro: Reusable, yako-yekushandisa, isiri-yekurapa-giredhi, yakakanganiswa machira kumeso kumeso. Inopihwa mumavara anoyevedza, aya anoshandiswazve machira echiso echiso ndeyekushandisa kusiri-Kwekurapa. Shandisa izvo ...
Kukura Kwechigadzirwa: 17.5cm x 9.5cm Bvunzo: Inokodzera Chigadzirwa kuita: BFE≥95% Raw Chinyorwa: Iyo yemukati neyekunze matanda ndeaya Asina-Yakarukwa machira, uye yepakati rukoko Melt-Yakaputirwa Isina kurukwa. Inoenderana neyakajairwa EN14683 (Typle 1) uye FDA Kukosha: 2 makore Kushanda: Iyo maski yakagadzirirwa kuve padhuze nezambuko remhino uye kuvhara chirebvu kuwedzera kuchengetedzwa. Mask yakavakwa nematatu matete akatetepa efaibha achibvumidza kufema kwakanaka. Masiki yekuvhiya inoitirwa kubatsira kuburitsa rakakura-chidimbu kudonha ...
SMS inoshanda sutu / sutu yekuzviparadzanisa
Disposable yekuvhiya mbatya jira inogadzirwa neyakareruka uye yakagadzikana SMS inoumbwa isina-yakarukwa machira. Iyo ficha ine hunhu hwesimba rakakwira, yakanaka kusefa kusefa, hapana kunamatira, unidirectional mweya kubvumidzwa uye anti kubvumidzwa. Panguva yekuvhiya, inogona kudzivisa kuvhara kweropa kuputika, hutachiona uye hutachiona.
Pressure guruu inodzivirira tsoka chevhavha, inoshandiswa kuchengetedza, inokodzera nhandare, zviteshi zvechitima, zviteshi zvechitima-zvinomhanyisa, zviteshi zvechitima, makiriniki, mafekitori, nezvimwe
Kudzivirira kuzviparadzanisa neshangu yekuvhara
Dziviriro yekuzviparadzanisa neshangu yekuvhara, inoshandiswa kuchengetedza, inokodzera nhandare, zviteshi zvechitima, zviteshi zvechitima-zvinomhanyisa, zviteshi zvechitima, makiriniki, mafekitori, nezvimwe